Muxuu Cumar Cabdirashiid ka yiri magacaabidda RW Xamsa? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu Cumar Cabdirashiid ka yiri magacaabidda RW Xamsa?
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ka hadlay isbaddalkii dhowaan ka dhacay Soomaaliya ee lagu doortay madaxda cusub ee DFS, hawlaha mudnaanta leh ee horyaala Madaxweynaha Xassan iyo Ra’iisal Wasaaraha Xamsa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa si ka duwan sida ay inta badan siyaasiyiinta reer Puntland uga fal-celiyeen magacaabidda Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre uga hadlay, isagoo weerar ku qaaday Madaxweynihii hore Farmaajo iyo Madaxweynaha Puntland Siciid Deni.
Cumar Cabdirashiid, wuxuu si weyn u soo dhaweeyay magacaabidda Xamsa oo ka dhigneyd middii ugu horreysay ee xilka Ra’iisul Wasaaraha loogu magacaabo shaqsi ka soo jeeda degmada Af-madow, wuxuuna is-baddelka dhacay ku macneeyay mid horseedi kara in tallaabo loo qaado qodobo hortabin leh oo dano siyaasadeed ku xirnaayeen.
RW Cumar, wuxuu Farmaajo iyo Deni ku eedeeyay in ay doorashadii dhamaatay 15 May 2022, ay si laga xishoodo saameyn ugu lahaayeen, taasoo sababtay in ku dhawaad labo sano doorashadu jiitanto, wuxuuse wanaag ku tilmaamay in u jeedooyinkii ay lahaayeen u hirgalin, shiddadoodii siyaasadeed ee heer federaalna ay soo idlaatay.
Cumar Cabdirashiid, wuxuu Golayaasha Baarlamaanka 11-aad ee JFS, ugu baaqay in ay la shaqeeyaan Madaxda cusub, maankana ka saaraan sidii ay kuraasta Baarlamaan u soo heleen iyo shaqsiyaadkii iyagoo dano siyaasadeed leh soo naas-nuujiyay oo ay ugu horreeyaan madaxda Dowlad gobolleedyada iyo madaxdii Dowladdii hore.
Hawlaha mudnaanta leh ee horyaalla Madaxweyne Xassan Sheeikh iyo Ra’iisal Wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre, ayuu ku tilmaamay, in ay ugu horreeyaan Amniga, dhameystirka Dastuurka, wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland, maqaamka caasimadda iyo doorasho qof iyo cod ah, isagoo madaxda ugu baaqay in ay Xukuumad tayo leh dhisaan.
RW Cumar, wuxuu labo xilli oo kala duwan soo qabtay xilka Ra’iisul Wasaaraha, 2009 ilaa 2010, wuxuu la soo shaqeeyay Dowladdii KMG ahayd ee Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, halka December 2014 ilaa March 2017, uu soo la soo shaqeeyay Madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuuna ahaa Ra’iisul Wasaarihii ka horreeay Xasan Cali Khayre.
Sharmaarke waxa uu qaab dublamaasiyadeed ugu soo shaqeeyay Qaramada Midoobay, Sri Lanka iyo Sierra Leone, wuxuu la taliye siyaasadeed ahaan uga soo shaqeeyay colaaddii Darfur ee Suudaan, kahor inta uusan noqon Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, sidoo kale wuxuu soo noqday safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington [Mareykanka].